ओलीले चाल्न सक्छन् अर्को मुर्खतापूर्ण कदम ; के हुँदैछ अब? – Sadhaiko Khabar
ओलीले चाल्न सक्छन् अर्को मुर्खतापूर्ण कदम ; के हुँदैछ अब?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: ८:४१:४८
काठमाडौं/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल–प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ । फैसलापछि आज सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँहरुले फैसला सकारात्मक आएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई अर्को मुर्खतापूर्ण कदम चाल्न सक्ने भन्दै त्यस्तो कुनैपनि कदम नचाल्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले ओली गलत भन्ने प्रमाणीत गरिसकेकाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उहाँको माग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमले जनताले दुख पाएको बताउँदै अब तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । अब अलिकति पनि लाज छ भने, नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुहोस्,’ प्रचण्डले केहि सञ्चाकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, ‘अर्को मूर्खता गर्नु भयो भने राजा–महाराजाको भन्दा ठूलो दुर्गती हुनेछ । यो मेरो सुझाव हो ।’
यसैबीच अध्यक्षद्वयले एकार्कालाई लड्डु खुवाएर खुशी साटासाट गर्नुभएको थियो । फैसलापछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ ।
९४७ पटक हेरिएको